Arintan maxaa looga aamusan yahay? | allsanaag
Arintan maxaa looga aamusan yahay?
Sidiii ay doorashada Beelaha Isaaq u bilaabantay, degaanada Maakhir waxa ku soo badanaya buun buuninta ururka Dadqalatooyinka argagixisda ee alshabaab oo ay wadaan rag iyo Dumar lacag lagu soo siiyey dacaayadahan si ay degaanka fawdo iyo amni daro uga abuuraan .
” Nimankii afka duubnaa laasqoray ayeey qabsadeen. Nimankii dadka dili jiray oo dhowr qof ah ayaa iyaga oo Hadaaftimo dul maraya la arkay. Nimnakii Buurta ku jiray Buraan Dusheeda ayaa lagu sheegay , Hadaladan oo dhami waa kuwa maalmahan laysla dhex marayey degaanada Maakhir oo been abuur ah, hase ahaatee la doonayo in bulshada reer Maakhir lagu baqdin geliyo si ayna uga hadlin, ula dagaalamin, lakala aamin baxo iyo in aan laga soo waramin halka ay ku sugan yihiin argagixisada Dadqalatooyinka ah ee aaminsan inay xoog ku joogaan Buuraha Calmadow, iyaga oo ka yimid Baydhabo iyo Burco.
Dadka ugu badan oo dacaayadan alshbaab ayaa meel walba maraya fidinayaa oo sida dadban ula shaqaynaya Alshabaab waa nimanka u shaqeeya maamulka SNM, ee ka soo jeeda beesha Warsangeli oo doonaya marka ay dadka baqdin geliyaan oo lays aamini waayo inay yiraahdaan Ciidamada Somaliland ayaa idin ka difaacaya alshabaab ee u ogolaada inay yimaadaan
Kooxda labaad, waa kooxda degaanka ka soo jeeda ee ku haya Dadqalatooyinka Buurha Calmadow, waa kuwo loo arko inay ganacsatadii degaanka yihiin, waa kuwo loo arko inay Culimadii degaanka yihiin. waa kuwa loo arko inay Odayaddi degaanka yihiin .Waa kuwa gawaaridooda la isticmaalaYO , waana kuwa u dal yaqaanka ah argagixisada.
Ugu danbayntii Waxgaradka degaanka iyo Ururka qurba joogta reer Maakhir ku midaysan tahay ee Sanaag, Sool iyo Bari SSB waa inay bilaaban wacyi gelinta iyo kaklsooni buuxda oo la siinayo bulshada. Waa in bulshada loo sheegaa in nin DADQAL AH OO Burco iyo Baydhabo ka yimid uuna Buraan iyo Badhan xoriyad ku mari karin. Guud ahaan Bulshada inteeda kale waa inay la shaqeeyaan ururkan balan qaaday Xoraynta oo ah in argagixisada Maakhir ku sugan xoog looga saarayo degaanka iyo balan qaadka kale oo ah Difaac oo ah in doorashada SNM ayna ka dhici doonin Maakir
← Farmaajo oo Xildhibaanada ka codsday inuu u khudbadeeyo 21 October Dadqalatooyinkii oo dilay hooyo iyo ilmo ay dhashay →